Gịnị kpatara Nna Stefano Gobbi? - Ngụda na Alaeze ahụ
Ozi nke Nwanyị nwanyị anyị nyere Fr. Gobbi site na mpaghara ime ụlọ bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị bara ụba na nkọwa zuru oke banyere ịhụnanya o nwere maka ndị ya, nkwado ya mgbe niile nke ndị ụkọchụ ya, mkpagbu na-abịanụ nke Nzukọ-nsọ, na ihe ọ kpọrọ “Pentikọst nke Abụọ,” okwu ọzọ maka ịdọ aka na ntị, ma ọ bụ ọkụ nke akọ na uche nke mkpụrụ obi niile. Na Pentikọst nke Abụọ a, Mmụọ nke Kraist ga-abanye mkpụrụ obi oge niile ike na nke zuru oke nke na oge nkeji ise ruo nkeji iri na ise, mmadụ niile ga-ahụ ndụ mmehie ya. Ozi ndị Mariam zigara Nna Gobbi yiri ịdọ aka na ntị na ihe omume a (ma emesịa nkwa nke ekwere na nkwa ma ọ bụ ntaramahụhụ) ga-eme na njedebe nke narị afọ nke iri abụọ. [Ozi # 389] Ozi nke Nwanyị Dịrị Anyị nke ccessga nke Ọma kwukwara na ụfọdụ n'ime ihe ndị a ga-eme na "narị afọ nke iri abụọ." Yabụ gịnị na-akọwa ihe dị iche na usoro iheomume nke ụwa?
Etuola m oge ọtụtụ ugboro ka m laa azụ na mbido ikpe nke nnwale ahụ, maka ịsachapụ mmadụ ọjọọ a, nke mmụọ nke ajọ ihe juputara ugbu a. (#553)
"... otu a ọzọ a gara m ọzọ na-ebighachi oge ntaramahụhụ nke ikpe ziri ezi nke Chineke nyere mmadụ bụ nke ka njọ karịa n'oge iju mmiri ahụ." (# 576).
Note: N’ihe dị ka afọ iri abụọ na atọ gara aga, otu nwoke na otu nwanyị na Kalịfọnịa, ndị ebikọrịrị na ndụ mmehie, enwetara nnukwute mgbanwe site na Ebere nke Chi. Nke a mere ka ha chegharịa ma banye n’oriri di na nwunye. Mgbe oge ntughari ha, nwoke ahụ malitere anya nuru olu Jisos (ihe anakpo “ebe anakpo”). Onweghi oghogo ma obu nghota nke okwukwe nke Katoliki, ya mere olu Jesu majara ya na anya. Na agbanyeghị na okwu ụfọdụ nke Onye nwe ya bụ ịdọ aka na ntị, ọ kọwara olu Jizọs dịka ọmarịcha ma dịkwa nwayọ. Ọ natakwara nleta site n'aka St. Pio na mpaghara si n'aka St. Thérèse de Lisieux, St. Catherine nke Siena, St Michael Onye isi na ọtụtụ ndị nwanyị si na Nwanyị anyị mgbe ha nọ n'ihu Sakrament Onye Ngọzi. Mgbe ezigasịrị ozi na nzuzo nke afọ abụọ (naanị onye a maara nwoke na ikwupụta ya n’ọdịnihu nke naanị Onye-nwe mara) ebe ndị ahụ kwụsịrị. Jizọs gwara nwoke ahụ, "A ga m akwụsị ịgwa gị okwu ugbu a, mana mama m ga na - eduzi gị."Di na nwunye a ka a kpọrọ ha ka ha bido ihe omume nke Marian Movement ma ọ bụ riestskọchụ ebe ha ga-atụgharị uche n'ozi nke Nwanyị anyị zigara Fr. Stefano. N'ihe dị ka n'oge ahụ, ihe oyiyi na ihe oyiyi dị nsọ malitere ire mmanụ na-esi ísì ụtọ mgbe a na-ere obe na akpụrụ akpụ nke St Pio bled (otu n'ime ihe oyiyi ndị ahụ na-anọnye ugbu a na Marian Center dị na Divine Mercy Shrine na Massachusetts) Ọ bụ afọ abụọ ka ọgbaghara ndị a ka okwu nke Jizọs mezuru: Nwanyị nwanyị anyị malitere idu ya, mana na N'oge mgbochi, na n'oge ndị ọzọ, nwoke a ga - ahụ "ikuku" n'ihu ya ọnụ ọgụgụ ozi ndị a na-akpọ "Akwụkwọ na-acha anụnụ anụnụ, " Nchịkọta nke mkpughe Nwaanyị anyị nyere Fr. Stefano kpọrọ "Nye Pkọchụ-aja nke ụmụ anyị hụrụ n'anya nke Nwanyị." Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na nwoke a mere ọ bụghị gụọ ihe Akwụkwọ Blue rue taa (dika mmuta ya nwere oke akwukwo ma nwee nsogbu igu akwukwo). N'afọ ndị a, ọnụọgụgụ / nọmba ndị ahụ nke mere ka ọ pụta ìhè n'ọtụtụ oge, mkparịta ụka nke mkparịta ụka ha na-egbochi, ma taa, ihe ndị na-eme gburugburu ụwa. Nke ahụ bụ, Fr. Ozi Gobbi kụrụ ada mana ọ na-achọta mmezu ha ugbua.
Mgbe ọ bụla emere ọnụọgụgụ ndị a ọnụọgụgụ na ala eze, anyị ga-eme ka ha nọrọ ebe a.
Colin B. Donovan, STL, “Marian Movement of O nchụàjà,” EWTN ọkachamara na-aza EWTN, wee banye na July 4, 2019, ewn.com
Ozi si n’aka Nna Stefano Gobbi
Secdị Nsọ nke Russia ọ mere?
Ajuju di oke nkpa ... na esemokwu.
ekweghị na Chineke, kọmitii, ido-nsọ, njehie, Fatima, Obi Obi Anyi, Jọn Paul ii, Paul vi, oge udo, pusi ii, Popu, Russia, sr lucia
Fr. Stefano-Gobbi - Ntughari ikpe ziri ezi
Nwaanyị anyị, # 282, Jenụwarị 21st, 1984:… ị ka nwere ike iwepụ atụmatụ ọjọọ ndị a, ihe egwu nwere ike ịbụ ...
Fr. Stefano Gobbi - Ihe omuma nke akọ na uche
Ọ ga-adị ka ikpe dị ka mini.
Fr. Stefano-Gobbi - Nwanyị anyị bụ Igbe
Nwanyị anyị rue, July 30th, 1986 N’oge Noa, ozugbo iju mmiri ahụ, ndị ahụ Onye-nwe nwere…
← Gịnị kpatara Elizabeth Kindelmann?
Gịnị kpatara Alicja Lenczewska? →